कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिले बिहीबार गरेको निर्णय भन्दै सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको फेसबूकको ‘भेरिफाइड’ पेज एकाएक निष्क्रिय बनाइएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिले 'काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधन सञ्चालन गर्ने' भन्ने निर्णय गरेको र केही बेरमा फिर्ता लिएको भन्दै उक्त पेजले तारन्तर सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनामा बिहीबार अपराह्न बसेको समितिको बैठकले शुक्रबार र शनिबार दुई दिन उपत्यकामा रहेका बासिन्दाहरूलाई बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले भने बैठक नै नबसेको बताएका छन् ।
“बैठक नै बसेको छैन, निर्णय कसरी गर्नु ? मान्छेहरु हिंड्दै राती राती घर जान थाले भन्ने सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि समिति संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग दिउँसो १–२ बजेतिर छलफल भएको हो । तर, एक्कासी निर्णय भनेर कसरी मिडियामा आयो हामी अचम्मित छौं” नेम्वाङले भने ।
“मन्त्रिपरिषद वा समितिले लिने यस्तो निर्णय कुनै बैठक नै नबसी कसरी सार्वजनिक भयो ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
उक्त सूचना मन्त्रिपरिषद कार्यालयको फेसबुकमा राखिएको एक घण्टा नबित्दै अपडेट गरिएको थियो भने केही बेरमा नै उक्त सूचना पेजबाटै हटाइएको थियो ।
फेसबुकमा “लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका वासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ” भनेर उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सूचना पछि संंसोधन गरेर “अपडेटः स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोली र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ” भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
जुन सूचना फेसबुकबाट पछि हटाइयो र केही समयपछि फेसबुकनै डिएक्टिभेट गरियो ।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सूचना सत्य नभएको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए । “काठमाडौंबाट बाहिर जानदिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहत दिने हो” मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुकको अर्को पोष्टमा लेखेका छन् “तीन गतेसम्म जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसौँ, समस्या भए वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ । तीन गतेपछि सिमित मात्रामा ठाउँ हेरी आउजाउ खोल्न सकिन्छ । धैर्य गरौँ ।”
‘भेरिफाइड’ फेसबुक पेजबाट उक्त सूचना हटाएको केही समयमा नै गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी यस सूचनामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
“काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई भोली शुक्रबार र पर्सि शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर पठाउने निर्णय भएको भनी केही सञ्चार माध्यममा प्रसारित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ” गृहमन्त्रालयका सह प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ “काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न कारणले रोकिएका नागरिकहरूलाई उपत्यका बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।”
सहप्रवक्ता अधिकारीले गृहमा टेलिफोन आएका कारण आफूले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “कतै पनि यस्तो निर्णय भएको जानकारी हामीलाई आएको थिएन । तर हामीलाई तारन्तर फोनमा गृहले सहयोग गर्न थालेको हो भनेर सोध्न थालेपछि हामीले विज्ञप्ति निकालेका हौं” सह प्रवक्ता अधिकारीले हिमालसँग भने । उनले मन्त्रिपरिषदको फेसबुक पेजमा सूचना राखिएको, संसोधन गरिएको र हटाइएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
यससँगै कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलको आधिकारिक फेसबुकबाट पनि पहिले सार्वजनिक भएको सूचनामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै खण्डन सार्वजनिक भएको छ ।
“भोली र पर्सी २८–२९ चैत्र २०७६ काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” पोखरेलको फेसबुकमा उल्लेख गरिएको छ ”यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।”
‘डिएक्टीभ’ भयो मन्त्रिपरिषदको फेसबुक पेज
पहिलोपटक उक्त सूचना सार्वजनिक गरिएको उक्त ‘भेरिफाइड’ फेसबुक पेज निश्क्रीय बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिवालयका पदाधिकारीहरुले आफूहरु कसैलाई पनि जानकारी नभएको बताएको केही बेरमा नै उक्त पेज फेसबुकबाट निश्क्रीय बनाइएको हो ।
सूचना हटाएपछि हिमालले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापालाई उक्त पेजबारे जानकारी मागेका थियो । थापाले आफूलाई र सचिवालयमा उक्त पेजबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको पेज भएकाले मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्तासँग यस विषयमा हिमालले बुझ्दा उनले आफूलाई पनि यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र भोलीसम्ममा थप बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । “म कार्यालय प्रवक्तालाई उक्त पेज बारे थाहा छैन । अरु कसैलाई जानकारी हुनसक्ने सम्भावना पनि देख्दिन” उनले भने ।
अहिले प्रविधि सम्बन्धी कामहरु भइरहेकाले कसैले खोलेको भए भोली बुझ्ने उनले बताएका थिए ।
तर त्यसको केही बेरमा नै उक्त पेज निश्क्रीय भएको छ ।